WARBIXIN: Lionel Messi oo laga waayay Liiska 10-ka Laacib ee ugu Wanaagsan Tuurida Laadka Xorta ah/Free Kicks – Gool FM
WARBIXIN: Lionel Messi oo laga waayay Liiska 10-ka Laacib ee ugu Wanaagsan Tuurida Laadka Xorta ah/Free Kicks
CR Shariif November 10, 2018
( Europe ) 10 Nof 2018. Lionel Messi ayaa shan jeer noqday laacibka ugu fiican kubbadda cagta laakiin waxaa jira hal boos uu ku liito xiddiga Barcelona iyo Argentina.
31-jirkaan ayaa dhaliyay laadka xorta ee ka badan laacib kasta oo ka cayaara shanta horyaal ee ugu waa wayn qaarada yurub, isagoo goolka ku hubsaday 13 mar tan iyo August 2015, laakiin saas ay tahay kuma jiro 10-ka ugu heysta tuurista Laadadka xorta ah tan iyo 2015.
Dhaliyaha ugu goolasha badan taariikhda kooxda Barca ayaa tuuray 134 free-kicks ama laadka xorta ah seddaxdii sano iyo barkii ugu dambeysay taa oo qiimeynteeda saxda ah 9.7 boqolkiiba.
Magaca sida lama filaankaa kaga soo muuqday kaalinta sare waa laacibka heerka caalami ee Macedonia Enis Bardhi, kasoo dhaliyay lix Bilisoon 25-jeer uu tuuray qiimeynta Laadadkiisana waa 24 boqolkiiba.
Kaliya Messi ayaa dhaliyay Bulusiyoono ka badan xiddiga Levante intii lagu guda jiray kal ciyaareedkii 2017-18.
Laacibka Atletico Madrid Antoine Griezmann ayaa ku jira kaalinta labaad wuxuuna dhaliyay shan Free kick 23 jeer uu tuuray laadka xorta ah halka booska seddaxaad uu galay ninka Messi ay dhalasho wadaaga yihiin ee Paulo Dybala.
Kaalinta afaraad waxaa ku jira Messi saaxiibka ay isku kooxda yihiin Philippe Coutinho, inkastoo inta badan shanta Free kick uu ka dhaliyay horyaalka Premier League gaar ahaan kooxdiisii hore ee Liverpool.
Magacyada kale ee 10-ka ugu horreysa laadka xorta ah waxaa kamida dambeedka bidix ee kooxda Hertha Berlin Marvin Plattenhardt waxaana xigga xiddigii sida aadka ugu dhawaaday xagaagii hore inuu ku biiro England ee Nabil Fekir kasoo kamida naadiga Lyon.
Markale laacib kamida Juve ayaa kasoo muuqday liiskan waana xiddiga kasoo jeeda Bosnia ee Miralem Pjanic, kasoo siddeed Free kick dhaliyay 42-dii bil ee lasoo dhaafay.
Cayaariyahanka SPAL Federico Viviani ayaa noqday mid kale oo ka socda horyaalka Serie A, ee qeyb ka ah xiddigaha ugu wanaagsan Bilisoonada wuxuu ka sareyaa laacibka ugu qaalisan kubbadda cagta Neymar, kasoo dhaliyay shan Free kick 44 jeer uu isku dayay laadka xorta ah.
Waxaana ugu dambeyn dhameystiray liiska laacibiinta ugu wanaagsan laadka xorta ah Simone Verdi oo u dheela Napoli.
Laacibka kale ee shanta mar loo caleemo saaray cayaariyahanka adduunka ee Cristiano Ronaldo ayaa isaguna kamida noqon liiskan wuxuuna kaliya dhaliyay laba Free kick seddaxdii sano ee u dmabeysay.
Ninka heerka caalami ee dalka Portugul ayaa Free kick qurux badan dhaliyay intii lagu guda jiray kulankii 3-3 ay la galeen Spain koobkii adduunka ee dhawaan soo idlaaday, waana kiisii ugu horreeyay uu dhaliyay kaddib 45 mar uu isku dayay tuurida Bilisoonka tartamada waa weyn uu xulkiisa matalay.
EEG Liiska 10-ka xiddig ee ugu heysta Tuurista Free Kick yada tan iyo bisha Agoosto 2015.
"Xaalkeenu Maaha sidaad moodo.".
Laacibkii hore Barcelona oo tilmaamay saddexda kooxood ee xili ciyaareedkan ku guuleysan karta Champions League